Maalinta faraxalka aduunka oo laga xusay jigjiga. - Cakaara News
Maalinta faraxalka aduunka oo laga xusay jigjiga.
Jigjiga (CN) jimce, 20, November, 2015, Waxaa magaalada jigjiga si balaadhan looga xusay munaasabada xuska maalinta faraxalka aduunka iyo habsami u isticmaalka suuliga fayo dhawrka munaasabadan oo uu soo diyaariyay xafiiska caafimaadka ayaa si heer sare ah uga dhacday hoolka shirarka ee kuliyada maaraynta iyo adeega shacabka DDSI.
Waxaana ka soo qaybgalay munaasabadaasi xuska masuuliyiinta xafiiska caafimaadka DDSI oo uu ugu horeeyo wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI mudane cabdifataax siciid, masuuliyiinka socotay xafiiska biyaha DDSI, xafiiska waxbarashada DDSI, masuuliyiin ka socday hay’adaha ay bahwadaagta yihiin xafiiska caafimaadka iyo waliba maamulada iyo ardayda isguulada maamulka magaalada jigjiga.
Waxaana ugu horayntii furitaankii munaasabada xuska ka hadlay wasiirka xafiiska caafimaadka DDSI mudane cabdifataax siciid oo sharax dheer ka bixiyay guulaha balaadhan ee ay xukuumada DDSI 5tii sano ee ugu danbeeyay ka soo hoysay dhinaca kor u qaadida adeegyada caafimaadka iyo sidii looga hortagilahaa cudurada loona xakamayn lahaa. Waxaa kale oo uu wasiirku si qoto dheer uga warbixiyay qorshayaasha xukuumada DDSI iyo xafiiska caafimaadka ee ku qotoma adeegyada caafimaadka oo uu sheegay wasiirku in xukuumada DDSI ee uu hormuud u yahay madaxwayne cabdi maxamuud cumar ay qorshaysatay in iyada oo laga duulayo taam yeelida adeegyada caafimaada in dhamaan bulshada deegaanka qoys waliba helo suuli/musqul u gaar ah, sidoo kale waxa uu masuulku tilmaamay ahmiyada ay leedahay xuska maalinta faraxalka aduunka oo caalamka, dalka iyo deegaankaba si meeqaam sare ah looga xusayo maanta.
Dhankiisa gadhwadeenka geedi socodka kor u qaadida ka hortaga cudurada iyo fayo dhawrka xafiiska caafimaadka DDSI mudane caydaruus axmed oo warbaahinta deegaanka la hadlayay ayaa ka si qoto dheer uga warbixiyay ahmiyada ay leedahay fayo dhawrka iyo maalinta faraxalka aduunka kuna booriyay bulshada deegaanka in ay siwayn ugu baraarugsanaadaan ahmiyada ay leedahay istimaalka suuliga iyo faraxalku si looga hortaga cudurada ka dhalan kara fayo dhawrla aanta.
Munaasabadan xuska maalinta faraxalka aduunka ayaa intii ay socoday waxaa lagu soo bandhigay tartan u dhexeeyay ardayda ka socotay isguulada maamulka magaalada jigjiga, kaasi oo ay ku soo bandhigayay ciyaaro dhaqameedka ay ka mid tahay dhaantada oo ka turjimayay ahmiyada ay leedahay maalinta faraxalka aduunku.
Gabagabadii munaasabadaasi ayaa waxaa masuuliyiintii ka soo qaybgashay xuska oo ay ugu horeeyaan wasiirka caafimaadka DDSI iyo agaasimaha guud ee mashruuca wash ee xafiiska biyaha DDSI mudane ilyaas cabdi ismaaciil ay si wada jir ugu faraxasheen goob loo diyaaray in lagu muujiyo maalinta faraxalka aduunka.